Ubuntu Touch buya kwi-Bionic Beaver kwaye iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 | Ubunlog
Ubuntu Touch idlula iBionic Beaver kwaye iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 kwisiqingatha sokuqala se-2021
Sele kuyiminyaka emi-5 okoko i-BQ yaqalisa I-Aquaris M10 Ushicilelo loBuntu. Ndikhumbula ndifuna ukuyizama, ngokuyinxenye kuba bendicinga Ubuntu Touch ingafana no-Ubuntu, kodwa unxibelelane. Kwiminyaka emine kamva ndaye ndakwazi ukuyivavanya, kodwa sele ndinayo iPineTab, ukuba indithathele ukuphoxeka okukhulu kodwa okuqondakalayo: ayikhangeleki ngathi yinguqulelo yedesktop, kwaye inezithintelo endinokuthi andizithathi njenge fan.
Kodwa apha asizukuthetha ngolu hlobo lwezithintelo okanye iimpazamo, kodwa malunga nesiseko sazo. Ubuntu Bokuchukumisa ngoku busekwe kwiXenial Xerus, oko kukuthi, Ubuntu 16.04 ekhutshwe ngo-Epreli 2016. Emva kwexesha elifutshane leengxoxo, abaphuhlisi base-UBports bagqiba kwelokuba kufanelekile ukuthatha umtsi omkhulu kwaye emva komhla wobomi we-16.04 Ubuntu ukuChukumisa tshintshela ku-Ubuntu 20.04, I-Focal Fossa ene-codenamed kunye nohlobo lwamva lweLTS lwenkqubo yokusebenza yeCanonical.
Sele besebenza ukuze Ubuntu Bamba busekwe ku-Ubuntu 20.04
Kodwa ngaphambi kokuba uthathe umtsi omkhulu, kukho injongo ephakathi: IBports Usebenza okwangoku ukwenza ukuba inkqubo yakhe yokusebenza isebenzise i-Qt 5.12, abaqinisekisa ukuba iya kuba yinyani kwi-OTA elandelayo. Ukuthathela ingqalelo ukuba eyokugqibela ukumiliselwa yayiyi I-OTA-15Ubuntu kulindeleke ukuba busebenzise Qt 5.12 kwi-OTA-16.
Kwaye kuya kutsiba nini kwi-Ubuntu 20.04 Focal Fossa? I-UBports khange ibonelele ngomhla ngqo, ngaphaya Kwisiqingatha sokuqala sika-2021. Kufuneka ikhunjulwe into yokuba Ubuntu 16.04 iyakuyeka ukufumana inkxaso ngo-Epreli walo nyaka, ke ngekhe kubi ukuba utshintsho lwenzeke ngaphambi kwelo xesha. Kodwa inyani kukuba abaphuhlisi babeka phambili uLomiri, imeko yemizobo, kwisiseko senkqubo ngokwayo, ngenxa yoko ngekhe kumangalise ukuba bathathe ixesha elide kwaye bathathe inyathelo sele lisehlotyeni. Ngayiphi na imeko, sele beqinisekisile ukuba utshintsho sele luqhubeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Ubuntu Touch idlula iBionic Beaver kwaye iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 kwisiqingatha sokuqala se-2021
ICosmonium, indawo yokukhangela yasimahla kunye nesoftware yeenkwenkwezi
IFirefox 85 isusa ngokupheleleyo iFlash Player, ibandakanya imisebenzi emitsha yokulwa umkhondo kunye nezinye izinto ezinqabileyo